Om चरणहरू एक प्रभावकारी ओमनिचेनेल मार्केटिंग रणनीति बनाउनको लागि - Print Peppermint
Ste चरणहरू एक प्रभावकारी ओमनिचेनेल मार्केटिंग रणनीति निर्माण गर्न
जुन 1, 2020 | मार्केटिङ, स्वरोजगार, सुरूवात
अनुभवले हामीलाई देखाइएको छ, सन्देशहरू जुन धेरै बिक्री-y हो, सहयोगी र अप्रिय कार्य अब कार्य गर्दैन। भनेपछि तिमी के गरछौ त?
ठिक छ, ओमिनिचेनेल च्यानल मार्केटि the दिन बचाउन आउँदछ।
रूपान्तरण वृद्धि गर्न र तपाईंको सन्देशहरूको प्रभावकारिता र मूल्य बढाउन एक ओमनीकनेल रणनीति सिर्जना गर्नु तपाईंको गोप्य हतियार हो।
तथ्या .्कका अनुसार, ओमनिचेनेल मार्केटिंग यति प्रभावकारी छ कि खरीद आवृत्ति छ 250% उच्च एकल च्यानल मार्केटिंगको तुलनामा omnichannel का लागि।
दिमागमा यो साथ, आउनुहोस् हामी कसरी सुपरचार्ज गर्नको लागि सबै भन्दा राम्रो omnichannel मार्केटि strategy रणनीति बनाउने ग्राहक जीवनचक्र मार्केटिंग प्रयासहरू।
ओम्निचेनेल मार्केटिंग भनेको के हो?
यो भ्रामक लाग्न सक्छ तर म तपाईंलाई आश्वासन दिन्छु omnichannel मार्केटिंग रकेट विज्ञान होईन।
जे होस्, यदि यो पहिलो पटक तपाईको बारेमा सुन्नुहुन्छ भने, त्यसपछि परिभाषालाई कभर गरौं।
ओम्निचेनेल मार्केटिंग एक बिक्री दृष्टिकोण हो जुन तपाईंको ग्राहकको यात्राभर एक सिमलेस र एकीकृत ग्राहक अनुभव प्रदान गर्ने उद्देश्य हो।
बहु-च्यानल दृष्टिकोणको तुलनामा, जहाँ प्रत्येक च्यानलको सन्देश अलग र अद्वितीय हुन्छ, ओम्निक्नेल मार्केटिंगमा, प्रत्येक च्यानल तपाईंको कम्पनीको लागि एक एकीकृत सन्देश सिर्जना गर्न सँगै काम गर्दछ।
यसलाई सरलताका साथ भन्नुपर्दा, तपाइँको ओमनिकनेल रणनीति एभेन्जरहरू सँगै राख्नु जस्तै हो।
र तपाइँ, निक फ्युरीको बजार बराबरको रूपमा, तिनीहरूलाई सँगै राख्नु पर्छ र दिनको बचत गर्नको लागि उनीहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सहयोग पुर्‍याउनु पर्छ!
ओम्निचेनेल मार्केटिंगका लागि सर्वश्रेष्ठ च्यानलहरू
आधुनिक मार्केटरहरूसँग मार्केटिंग च्यानलको अधिकता छ जुन ईन्टरनेट जडानको साथ सबैले सजीलो पहुँच गर्न सक्दछ।
जबकि च्यानलहरू बीचको सहज सहयोग तपाईंको सुनौलो टिकट हो तपाईंको सर्वव्यापी विपणन रणनीतिलाई रोक्नको लागि, त्यहाँ प्रत्येक च्यानल प्रयोग गर्दा काम गर्दैन।
सबै भन्दा राम्रो च्यानलहरू चयन गर्न, तपाईंले आफ्नो दर्शकहरू तपाईं समक्ष पुग्नको लागि सबैभन्दा बढी प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू फेला पार्न आवश्यक छ।
त्यसोभए, तपाईंले तिनीहरूलाई सहि तरिकाले लाभ उठाउनु पर्छ र तपाईं ओलिभनेल गियरहरू चालमा सेट गर्न तयार हुनुहुन्छ।
यहाँ केहि सबैभन्दा लोकप्रिय च्यानलहरू छन् जुन उपभोक्ताहरूले व्यवसायसँग कुराकानी गर्न प्रयोग गर्छन्।
अनुसार DMA को रिपोर्ट, ईमेल सँग उत्तम ROI त्यहाँ has 52 को साथ प्राप्त गरीन्छ प्रत्येक $ १ को लागि तपाईंले खर्च गर्नुभयो।
यस अविश्वसनीय च्यानलको फाइदा लिन, तपाईंले आफ्नो आगन्तुकहरूको ईमेल ठेगानाहरू कब्जा गर्न आवश्यक पर्दछ र त्यसपछि ग्राहक अनुभव प्रदान गर्नुहोस् जुन सिमलेस र एकीकृत हुनेछ।
ती ईमेलहरू क्याप्चर गर्ने सब भन्दा सजिलो तरिका तपाईंको वेबसाइटमा एक अनलाइन फारम सिर्जना र राख्नु हो।
त्यसोभए, तपाईंले यसलाई तपाइँको आगन्तुकहरूलाई प्रदर्शन गर्नु आवश्यक छ र तिनीहरूलाई प्रोत्साहन दिनुहोस् जुन तपाइँलाई उनीहरूको ठेगाना एक अद्भुत इनामको बदलामा दिनुहोस्।
यहाँबाट एक न्यूजलेटर साइनअप फारम छ टिम्बरल्याण्डको वेबसाइट:
ती ठेगानाहरू स collecting्कलन गरेपछि, तपाईं आफ्नो ईमेल मार्केटिंग प्लेटफर्म प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको मेलिंग सूची प्रबन्ध गर्न र अद्भुत अभियानहरू सिर्जना गर्न।
यदि तपाईंले अझै आफ्नो ईमेल मार्केटिंग रणनीतिका लागि उत्तम प्लेटफर्म फेला पार्नुभएको छैन भने, तपाईं केही राम्रोबाट लाभ लिन सक्नुहुन्छ नि: शुल्क ईमेल मार्केटिंग सेवाहरू त्यहाँ बाहिर, तिनीहरूलाई जाँच्नुहोस् र हेर्नुहोस् तपाईंलाई के उपयुक्त छ।
यो तथ्य हो कि ब्रान्ड दृश्यता बढाउनको लागि सोशल मिडिया एक सबैभन्दा कुशल डिजिटल मार्केटिंग च्यानल हो।
आधुनिक ग्राहकहरूले आफ्ना साथीहरूसँग सामग्री साझेदारी गर्न मात्र खर्च गर्दैनन्, तर उनीहरूले प्रयोग पनि गर्नेछन् सामाजिक संजाल नयाँ ब्रान्ड र उत्पादनहरूको खोजी गर्न एक च्यानलको रूपमा।
केही तपाइँलाई जानकारी वा थप सहयोगको लागि सोधेर एक सीधा सन्देश पनि पठाउँनेछ।
यसको मतलब सामाजिक मिडिया एक सगाई च्यानल भन्दा बढी हो।
केहि प्रख्यात प्लेटफर्महरू जस्तै फेसबुक र इन्स्टाग्रामको प्रयोग अफरको आश्चर्यजनक तरीका हो राम्रो ग्राहक सेवा, विश्वास निर्माण गर्नुहोस्, र तपाईंको अनुयायीहरूलाई तपाईंको ब्रान्डको वफादार समर्थकहरूमा परिवर्तन गर्नुहोस्।
सबै लोकप्रिय च्यानल जुन सर्वव्यापी ग्राहक अनुभवका लागि महत्वपूर्ण छ मोबाइल हो।
तथ्या to्कका अनुसार मोबाइल प्रयोगकर्ताहरूको संख्या पुग्न गइरहेको छ .7.33..XNUMX अरब प्रयोगकर्ताहरू २०२2023 सम्ममा, त्यसैले यसलाई तपाईंको रणनीतिमा समावेश गर्नु आवश्यक छ।
विशेष सिफारिशहरू मार्फत, अनुप्रयोगभित्र सन्देश पठाउँदै र सूचनाहरू धक्का दिनुहोस्, व्यवसायले पहिले भन्दा बढी निजीकृत ग्राहक अनुभवहरू पुर्‍याउन सक्छ।
उदाहरण को लागी, एक ग्राहकलाई आफ्नो शपिंग टोकरी नयाँ मा आफ्नो सामानहरु को लागी बिना मोबाइल मा आफ्नो शपिंग अनुभव जारी गर्न अनुमति दिनाले उनीहरुलाई सहज अनुभव दिन्छ कि तपाइँको बिक्री कोपल तल एक कदम उनको धक्का हुनेछ।
साथै, मोबाइल लिभरेजिले तपाईंलाई पहुँच पनि दिन्छ एसएमएस मार्केटिंग, एक महत्त्वपूर्ण उपकरण वास्तविक समय र व्यक्तिगत सन्देशहरू तपाईंको ग्राहकहरूको स्मार्टफोनमा सिधा पुर्‍याउन।
उदाहरण को लागी, एक छूट कोड संग एक राम्रो समय मा कार्ट त्याग एसएमएस तपाईको ग्राहक लाई ईमेल भन्दा छिटो पुग्छ, र संभावनाहरु छन्, यो लगभग तुरुन्त पढ्ने छ। यस तरिकाले, तपाईंसँग समयको संवेदनशील प्रस्तावहरूका साथ ग्राहकहरूलाई रूपान्तरण गर्ने राम्रो अवसर छ, सबैको साथ एसएमएस मार्केटिंग उपकरणहरू.
अब जब हामी तपाईंको मार्केटिंगको सब भन्दा शक्तिशाली च्यानलहरूको टोली भेला गर्दछौं, यो समय हो तपाईंको व्यवसायको लागि उत्तम सर्वव्यापी रणनीति सिर्जना गर्ने।
एक कुशल ओमनिचेनेल रणनीति सिर्जना गर्ने4तरिकाहरू
१. लाभ उठाउने निजीकरण
निजीकरण तपाईंको सुधार गर्न को लागी एक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्व हो विपणन अभियान दक्षता र रूपान्तरण दर।
रूपान्तरण गर्न, आधुनिक उपभोक्ताहरूले उनीहरूसँग उपयोगी सामग्री र मूल्यवान दुबै हुने प्रासंगिक सामग्री हेर्न आवश्यक छ।
जबकि निजीकरण एक ठूलो कार्य जस्तो लाग्न सक्छ, यो वास्तवमा लागू गर्न को लागी सबैभन्दा सजिलो चीज मध्ये एक हो।
यहाँ छ कि तपाइँ यो कसरी गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंको दर्शकलाई खण्ड गर्नुहोस्
अधिक प्रासंगिक सामग्री डेलिभर गर्न, तपाईले आफ्नो मेलिंग सूची समान रुचिहरूको साथ समूहमा विभाजन गर्नुपर्छ।
फेरि, तपाईं आफ्नो अनलाइन फारमहरूको शक्ति लिन सक्नुहुनेछ मूल्यवान डाटा स collect्कलन गर्नका लागि तपाईंको सदस्यहरूको उमेर, लि gender्ग, र भौगोलिक स्थान।
जब तपाईं यो जानकारी स collect्कलन गर्नुहुन्छ, तपाईं आधारितमा तपाईंको दर्शकहरूलाई विभाजन गर्न सक्नुहुनेछ जनसांख्यिकी र सामग्री प्रदान गर्नुहोस् जुन तिनीहरूलाई अनुरूप हुनेछ।
यहाँ एउटा उदाहरण हो Converse:
तपाईंको प्रतिलिपि निजीकृत गर्नुहोस्
तपाइँका अनुयायीहरूको नाम प्रयोग गर्दा तपाइँ उनीहरूसँग कुरा गर्नुहुँदा सोशल मिडियामा तपाइँको सन्देशहरूलाई मैत्री बनाउने उत्तम तरिका हो।
जब यो ईमेलको कुरा आउँदछ, यद्यपि तपाईले आफ्नो ग्राहकको नाम तपाईको विषय रेखा वा तपाईको इ-मेलको मुख्य भागमा सामरिक रूपमा थप्नु पर्छ।
केवल सोच्नुहोस् कि साधारण "हे, जोन" ले जन-पठाइएका अभियानहरूमा फेला परेको जेनेरिक "हे त्यहाँ" भन्दा धेरै व्यक्तिगत महसुस गर्दछ।
त्यस्तै गरी, तपाईंको विषय पंक्तिहरू तपाईंको ईमेलहरू खोल्नको लागि तपाईंको ग्राहकहरूलाई प्रोत्साहित गर्नको लागि व्यक्तिगत रूपमा अनुभव गर्नुपर्दछ।
यहाँ कसरी छ डलर सेभ क्लब दुबैमा निजीकरण प्रयोग गर्दछ:
यी ईमेलहरू राम्ररी गरिसकेका छन् उनीहरूले मलाई दाह्री राखेको चाहान्थे, तर त्यसमा विस्तार नहोस्।
सबैमा, एक निजीकृत प्रतिलिपि र विषय रेखा एक सफलको लागि आधार हो eCommerce रणनीति।
त्यसो भए, उच्च खुला र क्लिक-थोरै दरहरूको लागि व्यक्तिगतकरणको लाभ उठाउन कहिल्यै नबिर्सनुहोस्।
२. तपाईंको ग्राहकहरूको मनपर्ने च्यानलहरू प्रयोग गर्नुहोस्
एक सफल ओमनिचेनेल मार्केटिंग रणनीतिको पहिलो चरण भनेको सही च्यानलहरू पहिचान गर्नु र छनौट गर्नु हो।
तपाइँको रणनीति को लागी सबै भन्दा राम्रो छनौट गर्न को लागी, तपाइँ तपाइँको लक्षित दर्शकहरु तपाइँ पुग्न को लागी च्यानलहरु को उपयोग गर्न को लागी आवश्यक छ।
उदाहरण को लागी, यदि तपाइँको लक्षित दर्शकहरु तपाइँ संग संलग्न गर्न को लागी ट्विटर को उपयोग गर्दछ, त तपाइँ उनीहरु संग कुराकानी गर्न को लागी एक ट्विटर प्रोफाइल बनाउने विचार गर्न को लागी र तिनीहरूको समस्याहरु को समाधान गर्न को लागी गर्नुपर्छ।
यहाँ बाट एक महान उदाहरण छ डेल्टा होटेल ट्विटरमा:
तपाइँका दर्शकहरूलाई विशेष च्यानलहरूमा तपाइँको पछि लाग्न बाध्य पार्दै ओल्मीक्ननेल भनेको के होईन।
त्यसोभए, निश्चित गर्नुहोस् कि पहिले ग्राहक केन्द्रिक दृष्टिकोणलाई पूर्ण रूपले अपनाई निश्चित गर्नुहोस् र त्यसपछि तपाईंको इन्स्टाग्राम निर्माण सुरू गर्नुहोस् वा फेसबुक मार्केटिंग रणनीति।
चूंकि ओमनिचेनेल मार्केटिंग एक सिमलेस अनुभव प्रदान गर्ने कुरामा केन्द्रित छ, तपाईंले निश्चित गर्नु पर्छ कि प्रत्येक प्रतिनिधि व्यक्तिगत ग्राहक समस्याहरूको बारेमा पूर्ण जानकारी छ।
त्यसोभए, अर्को पटक ग्राहकले आफ्नो मुद्दाको बारेमा बिभिन्न प्रतिनिधिलाई कुरा गर्छन्, उनीहरूले उनीहरूको समस्या बुझ्ने र जान्ने एकल व्यक्तिसँग कुरा गर्ने महसुस गर्नेछन्।
Map. नक्सा ग्राहक यात्रा
उत्तम ग्राहक अनुभवहरू प्रदान गर्न तपाईंको ग्राहकहरूलाई बुझ्नु त्यति नै महत्वपूर्ण छ।
केवल समस्या, यद्यपि ग्राहकहरु एक अर्का भन्दा धेरै भिन्न व्यवहार गर्छन्।
तसर्थ, तपाईं एकल रणनीतिको साथ आउन सक्नुहुन्न जुन तिनीहरू प्रत्येकमा लागू हुनेछ।
तपाईंको ग्राहकहरू बुझ्नका लागि तपाईले आफ्नो व्यक्तिगत ग्राहक यात्राको नक्शा बनाउनुपर्दछ र स्क्र्याचबाट आफ्नो रणनीति बनाउन व्यक्तिगत डाटा प्रयोग गर्नुपर्दछ।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, एक ग्राहक यात्रा मा क्रेता र तपाईंको कम्पनी बीच अन्तर्क्रिया को विभिन्न चरणहरु को हुन्छ।
यसलाई पूर्ण रूपमा बुझ्नको लागि, तपाईले प्रत्येक चरणको नक्सा बनाउनु पर्छ तपाईको ग्राहकले सतर्कताबाट खरीद गर्नका लागि र बहु ​​च्यानलहरूमा बहु टच पोइन्टहरू पहिचान गर्न।
नतिजाको रूपमा, तपाईले प्रभावकारी सन्देशहरू सिर्जना गर्न व्यवस्थित गर्नुभयो जुन हुनेछ तपाइँको ब्रान्ड संलग्नता बढाउनुहोस् र तपाइँको विकास लाई बढावा दिनुहुन्छ।
Break. संगठनात्मक सिलोस बिच्छेद गर्नुहोस्
जबकि ग्राहक केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाउने तपाईंको सर्वव्यापी मार्केटिंगको लागि पहिलो चरण हो, संगठनात्मक साइलोहरू तोड्नु भनेको त्यस्तो चीज हो जुन यसको सफलताको ग्यारेन्टी दिन्छ।
तपाइँको विपणन, बिक्री, र ग्राहक समर्थन बिचको प्रभावी सहयोग सर्वोपरि महत्वको छ जब तपाइँ ओम्निकनेल जानुहुन्छ।
त्यसोभए, यदि तपाईं आफ्ना टोलीहरू तपाईंको ग्राहक-पहिले दृष्टिकोण अँगाल्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले उनीहरूलाई देखाउन आवश्यक छ कि तिनीहरू सबैले समान लक्ष्यहरू र दर्शन साझा गर्छन्।
यहाँ राम्रो संचारले यो सुनिश्चित गर्नमा ठूलो भूमिका खेल्दछ कि तपाईंको कम्पनीमा सबैले बुझ्दछन् कि तिनीहरू अब छुट्टै विभागमा सम्बन्धित छैनन्।
तपाईंको टोली एक एकीकृत टीमसँग सम्बन्धित छ जुन ग्राहकको अनुभवलाई प्राथमिकता दिन्छ र ग्राहकहरूलाई खुशी पार्न प्रयास गर्दछ।
यहाँ साइलो मानसिकता को एक हास्यास्पद तर सही चित्रण छ जुन तपाइँले केही फरक पर्दैन:
संगठन साइलोलाई तोड्दा एकै दिनमा हुन सक्दैन।
यद्यपि त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन स a्क्रमणलाई अलि मिठो बनाउन र त्यो संगठनात्मक साइलो-महल तोड्न मद्दत गर्दछ!
तपाइँका कर्मचारीहरुलाई अन्य सीपहरुमा तालिम दिई उनीहरुका सहकर्मीहरुलाई अझ राम्ररी बुझ्न र उनीहरुसँग राम्रो संग सहकार्य गर्न मद्दत गर्दछ।
साथै तपाईको विभागको सहयोगलाई अझ प्रभावकारिताका साथ प्रचार गर्न विभिन्न टीम सहयोगी उपकरणहरूको प्रयोग गर्न विचार गर्नुहोस्।
एकाधिक च्यानलहरूको सिमलेस र निजीकृत अनुभवको प्रस्तावले तपाईंलाई शपिंग अनुभवलाई सजिलो बनाउन र तपाईंको ग्राहकहरूको विश्वासलाई प्रेरित गर्न मद्दत गर्दछ।
एक प्रभावी ओमनिचेनेल मार्केटिंग रणनीति निर्माण गर्नाले तपाईंको बिक्री बढाउनेछ तर तपाईंको ग्राहक प्रतिधारणलाई कम गर्नुहुनेछ, कम गर्नुहोस् ग्राहक मंथन, र संलग्नता बढावा।
त्यसोभए, यदि तपाईं आफ्नो पहिलो ओमनीकनेल रणनीति बनाउँदै हुनुहुन्छ भने, व्यक्तिगतकरण सुरु गर्नुहोस्, तपाईंको ग्राहकहरूको मनपर्ने च्यानलहरू पहिचान गर्नुहोस्, संगठनात्मक सिलोहरू भत्काउनुहोस्, तपाईंको ग्राहक यात्राहरू नक्शा गर्नुहोस्, र तपाईं समयमै उत्तम ग्राहक अनुभवहरू प्रबन्ध गर्न सक्नुहुनेछ।
E SEO SEO सुझावहरू ई-कमर्स साइट सुरू गर्नका लागि
कसरी तपाइँको ब्लग डिजाईन करने को लागी तपाइँ एक प्रो Look को रूप मा बनाउन को लागी